जिम गर्नेलाई ढाडको नसा च्यापिने समस्या हुन सक्छ - ।। Naya Kuro ।।
१८ पुष २०७६, शुक्रबार ०८:०३ January 3, 2020 Naya KuroLeaveaComment on जिम गर्नेलाई ढाडको नसा च्यापिने समस्या हुन सक्छ
२०७६ पौष, १८: विश्वमा लाखौं मानिस ढाडको समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । मेरुदण्डमा हुने हाड र मांसपेशीका कारण ढाडको समस्या आउने गर्छ । ढाड दुख्ने समस्याको मुख्य कारण ढाडको नसा च्यापिनु रहेको डा. विप्लव सापकोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार ६० देखि ८० प्रतिशत ढाडको समस्या मेरुदण्डको नसा च्यापिएर हुने गर्छ, जसले हातखुट्टामा विभिन्न समस्या ल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, ढाडको दुखाइ, ढाडको नसा च्यापिने रोग, कारण, उपचार, बच्ने उपाय आदि विषयमा हाड तथा नसा रोग विशेषज्ञ डा. सापकोटासँग आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईले गरेको कुराकानीको सार :
डिस्क कति बाहिर निस्किएको हो, त्यस अनुसार रोगको उपचार गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा औषधिले केही हदसम्म यो समस्या कम गर्छ । तर औषधिले मात्र यसलाई निर्मूल नपार्न सक्छ ।
यदि नसा आधामात्र बाहिर निस्किएको अथवा च्यापिएको छ भने त्यसलाई फिजियोथेरापीद्वारा निको पारिन्छ, जुन पहिलो तथा दोस्रो अवस्था हो । डिस्क बाहिर निस्किएर नसा च्यापिएको अवस्थामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानिस एक्सरे गरेर ढाडको नसा च्यापिएको रहेनछ भन्ने सोचेर उपचार नै नगरी पनि बस्ने गरेका छन् ।
तर वास्तवमा एक्सरेले नसा च्यापिएको थाहा नै नहुन सक्छ । नसा च्यापिएको थाहा पाउन एमआरआई गर्नैपर्छ । एमआरआईपछि रोग पत्ता लागेर कतिपयमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
खुट्टा कमजोर भयो, दिशा पिसाब भएको थाहा हुन थालेन भने शल्यक्रिया गरेर डिस्क निकालेर फाल्नुपर्छ । माइक्रोस्कोपले सानो १ दशमलव ५ सेन्टिमिटरको प्वाल बनाई यन्त्रको सहायताले र दोस्रो खुला शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ ।
पहिलो र दोस्रो अवस्थामा नियमित फिजियोथेरापी गरेर डाक्टरको सल्लाहअनुसार काम गर्‍यो भने यो बल्झिने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर तेस्रो अवस्थाका केही बिरामीमा पुनः नसा च्यापिने रोग बल्झिन सक्दछ ।
यसलाई बल्झिन नदिन ढाडको नसा च्यापिएका बिरामीले निहुरिएर काम गर्नुहुँदैन, बसेर नुहाउनुपर्छ, ढाड सड्किने गरी गह्रौं सामान उठाउनु हुँदैन । डाक्टरको नियमित सल्लाहमा बस्नुपर्छ र डाक्टरको सल्लाह अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
(आर्थिक अभियान बाट)
आजबाट भारी हिमपात र वर्षा हुने : सतर्क रहनुहोस्
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १७:०६ June 1, 2020 Naya Kuro
३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०९:५२ June 14, 2019 Naya Kuro